သစ်ထူးလွင် : ကြေးနီတောင်၊ ဒေါ်ဒုခရိးများနှင့် အခြားနောက်ဆုံးသတင်း ( လင့် ) | Danya Wadi
»သတင်းများ»သစ်ထူးလွင် : ကြေးနီတောင်၊ ဒေါ်ဒုခရိးများနှင့် အခြားနောက်ဆုံးသတင်း ( လင့် )
သစ်ထူးလွင် : ကြေးနီတောင်၊ ဒေါ်ဒုခရိးများနှင့် အခြားနောက်ဆုံးသတင်း ( လင့် )
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သပိတ် စခန်းတွေကို အစိုးရဘက်က အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းတဲ့အပေါ် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်းအေးချမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ ဓါတ်ပုံ …
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 01:02:00 PM0comments
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 27
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ၃၀။ရန်ကုန်မြို့ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အောင်ကြွေပြား စက်ရုံရှိ အလုပ်သမား တစ်ဦးအား ယမန်နေ့ ည ကိုးနာရီခန့်တွင် လှော်ကား ရဲစခန်းမှ ရဲသုံးဦးက ရိုက်နှက်သောကြောင့် သေဆုံးမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမား အရေး ဆောင်ရွက်သော ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုသူဇော်က မြန်မာ့ခေတ်သို့…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 12:50:00 PM0comments
လက်ပံတောင်း ကြေးနီ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင် အစိုးရ လက်ထက်တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်အား မည်သို့ ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း ပြည်သူများ သိခွင့်ရှိ သင့်သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ယနေ့ နံနက်တွင် မုံရွာမြို့၌ ပြုလုပ်သော ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။သတင်း အပြည့်အစုံ…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 12:47:00 PM0comments
သွားနှင့်ကြသူများ”ဦးသန်းဝင်းကြီး ဆုံးပြီတဲ့။ ဝဋ်ကျွတ်တာပေါ့အေ။ နို့မဟုတ်ရင် သူသောက်ဖို့ သားသမီးတွေက ပိုက်ဆံပေးရတာနဲ့၊ ဝတ်ကြီးဝတ် ငယ်ပြုစုရတာနဲ့၊ တာဝန်ပေါ့သွား တာပေါ့’သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုး သမီးနှစ်ဦး လမ်းပေါ်လျှောက်ရင်း အချင်းချင်းပြောသွားသည့် စကား ဖြစ်သည်။ယင်း အမျိုးသမီးနှစ်ဦးပြော…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 12:32:00 PM0comments
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့နံနက်ပိုင် မုံရွာမြို့ဟောပြောပွဲ မြင်ကွင်းများ ဓါတ်ပုံ – Aung Nay Myo …
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 12:27:00 PM0comments
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရွှေ့ပြောင်းမှု လျော်ကြေးငွေ ကိစ္စ၊ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စနှင့် အကျိုးမြတ် ခွဲဝေမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသည် နှစ်ဖက်စလုံး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး သဘောတူပြီး ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဥပဒေများနှင့်အညီ…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 12:06:00 PM0comments
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မုံရွာမြို့  ဟောပြောပွဲ မြင်ကွင်းများ ဒီချူပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စနှင့် ပက်သတ်၍ ဒုတိယနေ့ မိန့်ခွန်းအဖြစ် ချင်းတွင်းမြစ် သဲသောင်ပြင်တွင် ဟောပြောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ 30 ရက်…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 11:55:00 AM0comments
ယနေ့ နံနက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မုံရွာမြို့ ခံများကို မိန့် ခွန်းပြော ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း နယ်မြေ အတွင်းရှိ သပိတ် စခန်းများအား လူအင်အားသုံး ဖြိုခွင်းခဲ့သည့်…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 11:48:00 AM0comments
“ကန်ရေပြင် မြေနီလမ်း ..တို့နဲ့ဝေး ..စွယ်တော်ခုံပြာတန်း တို့နဲ့ဝေး .. ယုံပါကွာ အချစ်ဆုံးမင်းကို . တို့တော့ သတိရ နေမှာပါ …”လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များစွာက ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဇွန်လများမှာ မိုးစက်များခပ်ဖွဲဖွဲရွာနေပေလိမ့်မည်။ စိန်ပန်းတွေလည်း ရဲရဲပွင့်နေလိမ့်မည်။ တရုတ်စကားပွင့်တွေလည်း…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 11:37:00 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံကို တရားမဝင် တင်ပို့မယ်လို့ ယူဆရတဲ့ နူကလီယား အနုမြူ အစီအစဉ်မှာ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ပစ္စည်း တချို့ကို ဂျပန် နိုင်ငံရောက် မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘော တစ်စီး ပေါ်ကနေ တွေ့ရှိတဲ့ သတင်း ပေါ်ထွက်လာ ခဲ့ပြီး တဲ့နောက်၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ဆီးနိတ် အထက် လွှတ်တော်အမတ် တစ်ယောက်…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 11:25:00 AM0comments
နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက သပိတ် စခန်းတွေကို အင်အားသုံး ဖြိုဖျက် လိုက်တာဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက် မဟုတ်ဘဲ ၊ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး စိုက်ရာ နေပြည်တော်က တိုက်ရိုက် ညွှန်ကြား ချက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မှုးကြီး ယုလွင်က ဆက်လက် ပြောပါတယ်။ သတင်း…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 11:13:00 AM0comments
သပိတ် စခန်းများအား နှိမ်နင်း ခဲ့ခြင်းကြောင့် သပိတ် စခန်းများရှိ သံဃာတော်များနှင့် ဒေသခံများ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အသုံးပြုခဲ့သည့် ဗုံးများမှာ မျက်ရည်ယိုဗုံးနှင့် မီးခိုးဗုံး မဖြစ်နိုင်ဟု အငြင်းပွား နေမှုများ အပေါ် ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်ဖြင့် ဒေါက်တာဘွဲ့…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 11:02:00 AM0comments
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ထုတ် Premier Eleven Sports Journal အတွဲ ၁၀ အမှတ် ၁၄
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ထုတ် Premier Eleven Sports Journal အတွဲ ၁၀ အမှတ် ၁၄ ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ …
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 10:55:00 AM0comments
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပန်းတောင်းတောင် ခရီးစဉ် (၁၀)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မုံရွာမြို့ ပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ လာရောက်တွေ့ဆုံလက်ပံတောင်း တောင် သပိတ် စခန်းအား အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းစဉ် ဒဏ်ရာရရှိသော ရဟန်း သံဃာများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အကူအညီ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် သံဃာတော် တစ်ပါးက မိန့်ကြားသည်။နိုဝင်ဘာလ…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 09:30:00 AM0comments
“ ဤ ”ကို “ကျွဲ” ဖတ်ရန်အတွက် အုပ်စုဖွဲ့ ညီညွတ်ကြလေသောအခါ(၂)
၎င်းမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ၏ လျို့ဝှက်ချက် များ ပေါက်ကြားသည်ဆိုကာ ထိုစစ်အရာရှိကြီးနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါသည်။ (ဤနေရာတွင်သက်ဆိုင်သူများ နှင့်သားမြေးများ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် အမည်များကို မဖော်ပြခြင်းအား နားလည်ခွင့်လွှတ်စေလိုပါသည်)။ ထိုအချက်ကို ယခု ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အကွက်ကျကျ အသုံးချလိုက်ကြသည်ဟု ဆိုချင်ပါသည် ။ အထပ်ပေါင်းများစွာ…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 09:16:00 AM0comments
“ ဤ ”ကို “ကျွဲ” ဖတ်ရန်အတွက် အုပ်စုဖွဲ့ ညီညွတ်ကြလေသောအခါ (၁)
ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံပေါင်းများစွာရှိကြပါသည် ။ နိုင်ငံတစ်ခု(state)ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် လူဦးရေ (popul-ation) နယ်မြေ အပိုင်းအခြား (territory) အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ (government) နှင့် အချုပ်အချာအာဏာ (sovereignty) ဟူသည့် အချက်များနှင့်ပြည့် စုံရပါသည် ။ နိုင်ငံတစ်ခုစီ၏ သမိုင်းနောက်ခံ အကြောင်းအချက်များ ၊…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 09:11:00 AM0comments
အစိုးရက ဘာကြောင့် ဒီလို ဖြိုခွင်းတာလဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က အခြေ အနေကို သွားရောက် လေ့လာဖို့ အစီ အစဉ် ရှိနေချိန်မှာ သူ့ ခရီးစဉ် မတိုင်ခင် လက်ဦးမှု ရယူပြီး ဖြိုခွင်းတဲ့ အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကို ကြည့်ရင်လည်း လွှတ်တော်ကို အံတု တာလို့ ပြောနိုင်ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး နဲ့ နွှယ်လာတယ် ဆိုတဲ့—သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန်…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 09:00:00 AM0comments
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပန်းတောင်းတောင် ခရီးစဉ် (၉)
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဒါဏ်ရာရှိသူ သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူ လူထုကို သွားရောက် ကူညီခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခရီးစဉ်ရှိသဖြင့် လမ်းဖွင့်ပေးရန် အာဏာပိုင်များကို ပြောကြား ခဲ့သော်လည်း ပြေလည်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယင်းနေရာ…
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 07:14:00 AM0comments
နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ ထုတ် 7Day News ဂျာနယ် အတွဲ ၁၁၊ အမှတ် ၃၈
နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ ထုတ် 7Day News ဂျာနယ် အတွဲ ၁၁၊ အမှတ် ၃၈ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ …
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 07:01:00 AM0comments
ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS JOURNAL VOL 4. NO.33
ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ ထုတ် EURO SPORTS JOURNAL VOL 4. NO.33 ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ …
သစ်ထူးလွင် 11/30/2012 06:57:00 AM0comments
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပန်းတောင်းတောင် ခရီးစဉ် (၈)
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုကြောင့် မုံရွာမြို့ ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိ နေသော ဒဏ်ရာရ သံဃာတော် များနှင့် ပြည်သူများကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ယနေ့ (နိုဝင်ဘာလ ၂၉)ရက် ည ၉နာရီခန့်တွင် လာရောက် ကြည့်ရှု နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်…
သစ်ထူးလွင် 11/29/2012 09:27:00 PM0comments
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၁၁-၂၀၁၂ အား ပယ်ဖျက်လိုက်ပါကြောင်း
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ညွှန်းကြားရေးမှုး ဦးဇော်ဌေး(ခ) ဦးမှူးဇော်မှ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် ၁၁-၂၀၁၂ အား ပယ်ဖျက် လိုက်ကြောင်း ၄င်းဧ။် ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နာတွင် ဖေါ်ပြ ထားသည်ကို တွေရသည်။ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် ၁၁-၂၀၁၂ အား ပယ်ဖျက် လိုက်ပါကြောင်း – Hmuu Zaw (facebook) ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ…
သစ်ထူးလွင် 11/29/2012 09:00:00 PM0comments
သံဃာတော် များမှာ ဖော့စဖိတ် ပါသော မီးခိုးဗုံး အမျိုးအစားဖြင့် ဖောက်ခွဲ ခံခဲ့ရ
မုံရွာ ဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ကုသ ခံနေရသော သံဃာတော် များမှာ ဖော့စဖိတ် ပါသော မီးခိုးဗုံး အမျိုးအစားဖြင့် ဖောက်ခွဲ ခံခဲ့ရသည့် အတွက် ရေနှင့် ထိတွေ့ ရာတွင် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒဏ်ရာ ရသူများကို ဆေးကုသ ပေးနေသော မုံရွာ ဆေးရုံမှ တာဝန်ကျ ဆရာဝန် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ သတင်း…
သစ်ထူးလွင် 11/29/2012 08:32:00 PM0comments
ယခင်အစိုးရနှင့် စီမံကိန်းအား ကာကွယ်၍ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်
လက်ပံတောင်း တောင် သပိတ် စခန်းများ ဖြိုခွဲရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် အစိုးရ သတင်း ထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့မှ ကြာသပတေး နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ လိုက်သည်။ ကြေးနီ ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းမှာ ယခင် နအဖ အစိုးရ လက်ထက်က —-သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး…
သစ်ထူးလွင် 11/29/2012 08:10:00 PM0comments
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်စဲရန် သပိတ်မှောက် တောင်းဆို နေကြသော ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီ ရုံးရှေ့မှ ပင်မ သပိတ် စခန်းကို ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၃ နာရီခန့်က လုံခြုံရေးရဲများက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့၍ သံဃာအပါး ၃ဝ မှာ မုံရွာ ဆေးရုံကြီးတွင် တင်ထား ကုသမှု ခံယူနေရပြီး တပါးမှ စိုးရိမ်ရသည့်…
သစ်ထူးလွင် 11/29/2012 07:53:00 PM0comments
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ပန်းတောင်းတောင် ခရီးစဉ် (၇)
မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ကန့်ကုန်းကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်က ပြောကြားခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်း အပြည့် အစုံ။ ကိုယ်လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ မရဘူး။ အများနဲ့ ညီအောင်လို့ အများကောင်းကျိုးအတွက် တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ရဲ့ အကျိုးကို အနောက်မှာ ထားပြီးတော့…
သစ်ထူးလွင် 11/29/2012 07:20:00 PM0comments
← Muslims Face Expulsion From Western Myanmar | Thomas Fuller
2 comments on “သစ်ထူးလွင် : ကြေးနီတောင်၊ ဒေါ်ဒုခရိးများနှင့် အခြားနောက်ဆုံးသတင်း ( လင့် )”
moethike December 20, 2012 at 1:10 pm	Reply
Naing Lin December 27, 2012 at 7:44 am	Reply